Tetikasa Padap – Marovoay: vahaolana voalohany ny fanadiovana ny lakandrano | NewsMada
Manajary ny lakandrano any Marovoay ny tetikasa Padap* amin’izao fotoana izao ho famerenana ny lazany amin’ny maha sompitr’i Madagasikara azy. 70 % avy amin’ny Banky iraisam-pirenena, 30 % avy amin’ny AFD ny vola hoentina amin’izany asa fanajariana izany. Tanjona nananganana ny Padap tamin’ny taona 2017, ny hampitombo ny vokatra. Ho an’i Marovoay, vahaolana voalohany ny fanadiovana ny fivoahan’ny rano sy ny lakandrano
Taona maro tsy nisy fikojakojana ny lemaka anarivony hekitara, hany ka tanimbary maro no maty, satria tototry ny fasika ireo lakandrano.
Ny dimy taona ho avy amin’ity tetikasa ity ny fiantohana tsy tapaka ny fampandehanana ny rano manondraka tanimbary. Hamafisina amin’ny lafiny teknika izany fanondrahana tanimbary izany, hataon’ireo mpamboly any an-toerana. Ny tontolon’ny fambolena nozahana no antony nisafidiana an’i Marovoay noho ny fisian’ny velaran-tanimbary midadasika tokony ho voatondraka ka hampitombo ny voka-bary sy ny fidiram-bola ho an’ireo tantsaha. Antoky ny fampandrosoana ny toekarena maharitra miainga avy amin’ny fambolena.
Anisan’ny mahazo fanohanana avy amin’ity tetikasa ity ny vondrom-bahoaka intsinjaram-pahefana, raha manana fandaharanasa fanajariana sy fitantanan-drano. Zahana ihany koa ny fananan-tany, ny fitandroana ny ala miaraka amin’ny zavaboary manodidina ho fiarovana ny farihin’Ambaromalandy tsy ho ritra.
Matoky ny fanarenana izao fotodrafitrasa izao ireo mponina any amin’ireo kaominina ambanivohitra rehetra ao amin’ny distrikan’i Marovoay, hiadiana amin’ny tsy fanjarian-tsakafo. Miasa manadio ny lakandrano amin’izao fotoana izao ireo trakitera sy fitaovana vaventy karamain’ny tetikasa Padap. Nijery ny fizotran’ny asa ny governoran’i Boeny, Andriatomanga Moktar Salim.
Padap* : Projet d’agriculture durable par une approche paysage